July 2016 - Puntland Mirror Believable Media Website
July 31, 2016 Puntland Mirror 0
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland’s Member of Parliament, Mohamed Farah Adan “Canjeex” who was detained by Somaliland forces, was freed on Sunday, official said Puntland MP who told Puntland Mirror has confirmed the release of the Canjeex, […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Maamulka Somaliland ayaa maanta sii daayay xildhibaan baarlamaanka Puntland kamid ah kaasoo dhawaan ay qabsadeen. Xildhibaan Maxamed Faarax Aadan “Canjeex” ayaa maanta la sii daayay, sida uu warsidaha Puntland Mirror u sheegay xildhibaan […]
Kooxda kubada cagta Puntland oo ku guulaysatay ciyaaraha maamul goboleedyada Soomaaliya oo si weyn loogu soo dhaweeyay Garoowe
July 31, 2016 Abdi Omar Bile 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Kooxda kubada cagta Puntland ayaa maanta oo Axad ah dib ugu soo noqday caasimada dowlada Puntland, Garoowe. Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali, Madaxweyne ku-xigeenka Cabdixakiim Cumar Camay, xubno kamid ah golaha wasiirada […]
Turkiga oo ilaa iyo hadda ruqseeyay 1,400 oo ciidamada militariga ah
Ankara-(Puntland Mirror) Turkiga ayaa ruqseeyay 1,389 oo ciidamada ah kuwaasoo looga shakiyay in ay xiriir la leeyihiin wadaadka ganacsadaha ah Fethullah Gulen, ee fadhigiisu yahay dalka Maraykanka, kaasoo dowlada Turkiga ay ku eedaysay isku-daygii afgembiga […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) At least 12 people including two attackers were killed in suicide attack targeting Somali CID headquarters in the Somali capital, Mogadishu on Sunday morning, according to the Reuters, citing police officials. Al-Shabab armed […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dhawaaqa labo qarax oo ay daba socdeen xabadaha qoryaha ayaa laga maqlay goor dhoweyd caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Kooxda al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarka dhacay maanta oo Axad ah. Ugu yaraan todobo qof […]
July 30, 2016 Puntland Mirror 0
Mogadishu-(Puntland Mirror) Unidentified gunman have shot dead Somali police officer in Karan district of Mogadishu, official said. The spokesman of the ministry of security, Abdimalik Malin Shukri told to the local media that the police […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kooxo hubaysan oo aan la aqoon cidda ay yihiin ayaa caawa fiidkii ku dilay degmada Karaan ee Muqdisho sarkaal katirsan ciidamada booliiska Soomaaliya, sida ay sheegeen saraakiisha. Afhayeenka wasaarada amniga dowlada federaalka Soomaaliya […]
July 30, 2016 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Safiirka dowlada Turkiga u qaabilsan Soomaaliya ayaa uga mahadceshay shacabka Soomaaliyeed taageerada ay u muujiyeen markii uu dhacay isku-daygii afgembiga fashilmay oo dhacay labo asbuuc kahor. Safiir Olgan Bekar oo shir jaraa’id ku […]
Somali political leaders will meet in Mogadishu amid fears election could be delayed
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s information minister has said on Saturday that the Somali political leaders will hold meeting in Mogadishu next week. Minister Mohamed Abdi Mareye told Somali national news agency (Sonna) that the meeting about […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada waddooyinka. Shilka ayaa ka dhacay wadada tuulada Guud-cad ee u dhaxaysa Boosaaso iyo [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddiga Kumeelgaarka ah ee Doorashooyinka Puntland (TPEC) ayaa maanta oo Arbaco ah baahisay liiska kama dambeysta ah ee codbixiyeyaasha doorashooyinka hordhaca ah ee dowladdaha hoose. 46,839 cod oo sax ah oo iska-diiwaangelisay saddexda [...]